Top News :- Galmudug oo Jubbaland ugu hambaliyaysay gusha ay ka gartay dib u heshisinta Beelaha +Sawiro – Kismaayo24 News Agency
Top News :- Galmudug oo Jubbaland ugu hambaliyaysay gusha ay ka gartay dib u heshisinta Beelaha +Sawiro
by admin 26th March 2016 26th March 2016 3 104
Dowlada Goboleedka Galmudug State of Somalia ayaa si weyn u so dhawaysay Heshiiski Taarikhiga ahaa ee dhexmaray Maamulka Jubbaland iyo Beesha Sade kaas oo shalay Xaflad lagu soo bandhigayay ay ka dhacday Kismaayo.
Wasiiru Dowlaha Wasaarada Caafimaadka Galmudug State of Somalia Mudane Cali Dahiir Ciid ayaa Hambaliyo u diray Madaxdi isku howshay in ay so Afjaraan Khilaafki u dhexeyay beesha Sade iyo Maamulka Jubbaland.
Wasiiru Dowlaha Wasaarada Caafimaadka Galmudug State of Somalia Mudane Cali Dahiir Ciid oo arinkaasi ka hadlaya ayaa waxaa u yiri.
” Anigo ku hadlaya Magacayga kan Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug State of Somalia waxaan halkan ka soo dhaweynayaa Heshiiski Taarikhiga ahaa ee ay wada gaareen Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo Beel ka mid ah Beelaha Deeganka Jubbaland.
Waxaan sido kale si gaar ah u bogaadinaynaa Madaxdii isku howshay in shirarki Nabada Jubbaland ay ka mira dhaliyaan kuwaas oo aan ka xusi karo Wasiirka Gaashandhiga Somalia Gen Cabdiqadir Sh Cali Diini iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islam.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa u yiri Dowlada Galmudug State of Somalia waxay shacabka Jubbaland u rajaynaysa Nabad iyo Hormar iyo in markasta ay khilaafkooda ku xaliyaan miska wada xajoodka.
Galmudug State of Somalia ayaa noqonaya Dowlad goboleedki ugu horeyay ee ka hadlay heshiiski taarikhiga ahaa ee ay wada Gaareen Maamulka Jubbaland iyo Beesha Sade marka laga reebo Qaramada Midobay oo maalinti shalay ahayd soo saartay war ay ku taageerayso Heshiiska ayado dhanka kale aan wali war laga hayn Dowlada Fadaralka Somalia.
Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida wasiirkii hore ee caafimaadka Dr Aadan Xaaji Ibraahim
Gen Diini oo shir uga qayb galaya Masar
Daawo: Dowladda Federalka Somalia oo u hanjabtey Somaliland.
admin 20th April 2015 27th August 2015
Dhagayso:- Madaafic Xalay Lagu Garaacay qaybo Kamid ah Muqdisho
admin 20th May 2014 28th August 2015
TOP NEWS: Dhageyso Kenya oo lagu edeyay in ay wali gacan bidixaynayso Beesha Sade ee Jubbaland
admin 13th April 2016